Isithsaba seBelt sokuDibanisa umatshini, Umatshini ohambisa iBelt usonge umatshini-uAntai
Isixhobo esifanelekileyo sokudibanisa (ukulungiswa) kwezixhobo kwaye sisetyenziswe ngokubanzi kwizinyithi, ezemigodi, isamente, izityalo zamandla, amazibuko, izinto zokwakha, amachiza kunye namanye amacandelo.
IINDLELA ZOKUFUMANA IZIXHOBO ZE-ANTAI
NAWE WONKE AMANYATHELO ENDLELENI.
Ukusuka ekukhetheni nasekuqwalaseleni ilungelo
umatshini ngomsebenzi wakho wokukunceda ekuthengeni izinto ezenza ingeniso ebonakalayo.
Amacandelo e-Belt Vulcanizing Press ZLJ Series Hea ...
Ukusetyenziswa Ilaphu ibhanti 100 p ...
Ukulungiswa komphetho kwiVulcanizing Press yeRubber Convey ...
Imo yenkcazo yezinto ...
Iimpawu: amandla High al ...
Uxinzelelo lwamanzi opholileyo kumatshini wokuqhafaza
Imodeli yeBelt Belt (mm) ...
Ibhanti yokuhambisa ipapashwa ngokucinezela ishushu
DB-G uhlobo Steel Cord swa Belt yokuzikhwebula Mach ...
Amanqaku 1. Isantya sokuxobuka ...
Ingqele Bond Cement for ngerabha swa Belt Splic ...
Iimpawu zeHig ezingenakutsha ...
C-uqinisa yokulungisa Vulcanizing Cinezela ngerabha Bel ...
Umzekelo weTemperatur ...
Cinezela Vulcanizing Cinezela ukuKhanya ngerabha ...
Imodeli yeBelt (mm) Fra ...
Qingdao Antai Mining Machinery Co., Ltd. inaf emva koku kubizwa ngokuba yi-Antai Inkampani） ikwindawo entle yeQingdao West Coast Zone, u-Antai ngoku sele eyimishini yoomatshini kunye nezixhobo zokuvelisa ezinothungelwano lonke loyilo lophando, ukwenziwa kunye ufakelo, ulondolozo lwasemva kwentengiso, ulondolozo lwezixhobo kunye neenkonzo zonxibelelwano.
Ulondolozo lweVulcanizing Press
NgoJanuwari / 22/2021
Njengesixhobo sokudibanisa ibhanti yokuhambisa, i-vulcanizer kufuneka igcinwe ngendlela efanayo nezinye izixhobo ngexesha nasemva kokusetyenziswa ukwandisa ubomi bayo benkonzo. Okwangoku, umatshini we-vulcanizing oveliswe yinkampani yethu unobomi obungaphezulu kweminyaka eli-10 ukuba usetyenziswa ngokufanelekileyo kwaye ugcinwa. I ...
Ukusetyenziswa kunye noPhuhliso lweBelt yokuhambisa
Ibhanti yokuhambisa yeyona ndawo iphambili yokuhambisa ibhanti. Isetyenziselwa ubukhulu becala ukuthuthwa okuqhubekayo kumalahle, imigodi, isinyithi, imichiza, ulwakhiwo kunye namacandelo ezothutho. Izinto eziza kuthuthwa zahlulwe zaziibhloko, umgubo, iipasta kunye namaqhekeza. Izinto njl.
Indlela yokudibanisa yebhanti yokuhambisa irabha
Apha i-THEMAX izakwazisa ngeendlela ezahlukeneyo zokudibanisa zebhanti zokuhambisa irabha. Ibhanti yokuhambisa kufuneka idityaniswe kwiluphu ngaphambi kokuba isetyenziswe. Ke ngoko, umgangatho wokudityaniswa kwebhanti yokuhambisa ubuchaphazela ngokuthe ngqo ubomi benkonzo yebhanti yokuhambisa kunye nokusebenza kakuhle kwe-lin yokuhambisa ...